China High Output 9KW 300L / Maminitsi Guruva Mask Kugadzira Machine fekitari uye vagadziri | Frand
High Output 9KW 300L / Maminitsi Guruva Mask Kugadzira Machine
Kudzora nzira: PLC kutonga
Weigtht: anenge 2Toni
Chiso chemask chimiro. 3-4 akaturikidzana
Blank chifukidzo kugadzira muchina. Iyo yepamberi muchina wedhizaini isina-yakarukwa kumeso kugadzirwa kwemasiki, ndeyakazara otomatiki muchina kuburitsa isina chinhu masiki kubva pakudyisa mbishi zvinhu, kuisa & kucheka mhino waya, kuteterera, overedge, ultrasonic kutenderera kutema kucheka. Iyo yakapera isina kuvhara masiki ichaverengerwa uye akaunganidzwa pane anotakura.
Tsanangudzo yeFace Mask Kugadzira Machine
220V 60HZ kana yakagadzirirwa
Kugadzirwa kwemask mask
Meso mask zvinhu
Chiso mask chimiro
Rinoshanda kuraswa Mask Kuita Machine:
Muchina uyu une aluminium alloy rack. Kuonekwa kwacho kwakareruka uye kwakanaka. Inogona kupedzisa kugadzira iyo figuration panguva imwechete neyakajeka mafomu. Nesimba rinobva kunze rakakwenenzverwa rinogona kusimbisa zvakasimba uye marara zvigadzirwa zvichaburitswa otomatiki. Iyo yekomputa chirongwa chinodzora uye photoelectric kuona inoita kuti ive nekuvimbika kwakanyanya uye yakaderera kutadza chiyero. Chigadzirwa chinogona kushandiswa zvakanyanya mukusvibisa kwepamusoro kwemaindasitiri, mafekitori uye migodhi.
Zvinoumba kuraswa Mask Kuita Machine:
1. Tora nzira yekutanga yemuchina wechiGerman. Yakadzikama mhando uye yakanyanya kushanda.
2. Inogona kuita mask ye 2-5 layer mbishi painodiwa
3. Izvi zvakasiyana nemimwe yekupeta maski muchina, ino gadza yemhino clip yekuisa yuniti: iyo yemhino clip inogona kuiswa kana ichiburitsa mask iyo isu yatinoda, wobva wapeta kutenderera nekugadzira, izvi zvinonatsiridza iyo otomatiki uye chengetedza iyo yebasa mutengo weiyo mugadziri.
4. PLC kutonga, otomatiki kuverenga, Nyore shanda, yakanaka yekupedzisa chigadzirwa.
5. Servo mota kudzora, dhizaini kudzora chaiko.
6. Muchina furemu yakagadzirwa kubva kualuminium, iwo mativi ane yakanamirwa pamifananidzo, anotaridzika akashata runako uye anoshanda.
1 Warranty: 1 gore kubva pazuva rekutumirwa. Kana paine chero kukuvara panguva iyo yakakonzerwa neMutengesi, Mutengesi anozopa zvemahara kugadzirisa pane saiti uye yemahara chikamu chinotsiva (Zvakasarudzika zvekukurumidza-kupfeka zvikamu).
2 Mutengesi anopa hupenyu-hurefu hwekuchengetedza sevhisi, chete mutengo wevashandi ndiwo unodikanwa kana kupfuura nguva yewarandi. Kana paine chero zvikamu zvekukuvara zvaida kuchinjaniswa uye Mutengesi haasi iye ane mhosva, Mutengesi ane kodzero yekukumbira mutengo wezvemari wekutsiva chinhu.
3 Mutengesi anozopindura kune chero zvikanganiso zvirevo mukati maawa mana nefoni, email, uye fakisi. Zvebasa rekuchengetedza mudunhu reFujian mukati memaawa makumi matatu nematanhatu, kunze kwedunhu reFujian mukati maawa makumi manomwe nemaviri. Zvekutsiva zvinhu, iyo chaiyo nguva inogona kutaurirana kuwedzera.
4 Mutengesi anopa mahara kudzidziswa kwevashandi vanoshanda.
5 Mutengesi anozopawo ruzivo rwakakodzera rwehunyanzvi, kusanganisira yekuraira kwekushandisa & nekukurumidza kupfeka zvikamu zvemifananidzo
Pashure: 1550KG 1 Chikamu 50-55 Pcs / Min Mask Kugadzira Machine
Zvadaro: 55pcs / min 6KG / cm2 Mask Kugadzira Muchina Wevasina Kuruka Mask PLC Kudzora
chifukidzo kugadzira michina
asiri rakarukwa chifukidzo kugadzira muchina
10KW 30-40PCS / Min Otomatiki Chiso Mask Kugadzira ...
Medical Kusvibisa Mask Kuita Machine With Alum ...
Yekumhanyisa Yakazara Yega otomatiki N95 Mask Kugadzira Machine
kuvhiya kumeso mask kugadzira muchina, asiri rakarukwa chifukidzo kugadzira muchina, asiri dzakarukwa kumeso chifukidzo kugadzira muchina, hosipaipi yekuchina muchina, kuvhiya chifukidzo kugadzira muchina, kumeso mask kugadzira muchina,